Nepali Rajneeti | थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं : सरकार
थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं : सरकार
बैसाख १८, २०७८ शनिबार ३०५ पटक हेरिएको
वीर अस्पतालमा एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा बिहीबार रेनुका केसी आचार्यलाई कोरोना संक्रमण रहेको पत्ता लाग्यो । शल्यक्रियालगत्तै उनलाई कोभिड वार्डमा भर्ना गरियो । तर २४ घण्टा बित्दा पनि कुनै चिकित्सकले खोजखबर गरेनन् ।
दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरु । तस्बिर : कान्तिपुर
आचार्यसँगै सो वार्डमा अन्य २५ जना कोरोना संक्रमित छन् । ती सबैका आफन्तको एउटै गुनासो छ– ‘चिकित्सक छन्, नर्स पनि छन् तर संक्रमितलाई छुन मानिरहेका छैनन् ।’
वीरमा मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकाका प्रायः सबै कोभिड अस्पतालमा अहिले कोरोना संक्रमितको चाप थेगिनसक्नु छ । आफन्तको आकांक्षा पूरा गर्न चिकित्सकलाई हम्मे परिरहेको छ । सरकारी अस्पताल होस् वा निजी, सबैले आफ्नो क्षमताभन्दा माथि नै कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितलाई बेड मात्र नभई केहीथरी औषधिको पनि संकट पर्ने देखिएको छ । यही अनुपातमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए उपत्यकाका जेनेरल अस्पतालले कोरोना संक्रमितका लागि सबै बेड छुट्याए पनि धान्न कठिन पर्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च गतिमा फैलिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ । यो भनाइबाट सरकारले महामारी नियन्त्रणमा हात उठाएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित २२ जिल्लामा संक्रमण फैलने दर डरलाग्दो भएकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आइसकेको जनाएको हो । शुक्रबार मात्रै मुलुकभर ५ हजार ७ सय २७ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ३ हजारभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा छन् ।
‘सरकारले संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्न लकडाउन गरेको छ । तर हामीलाई भोज, जात्रा, सम्मेलन गर्नै परेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अत्यावश्यक सेवाका लागि पास दिने भनेको छ । पास लिने लाइनमा सबैभन्दा धेरै बिनाकाम रवाफ देखाउन निस्कनेको भीड छ ।’ ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले चरम विन्दुमा पुगेर सेवा दिइरहेको बताए ।
उनका अनुसार सय बेडको स्वीकृति लिएको अस्पतालले ८१ बेड कोरोना संक्रमितका लागि उपलब्ध गराएको छ । ‘हामीले २१ बेड आईसीयू र अन्य ६० बेड कोरोना संक्रमितलाई मात्रै राखेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै बेडमा संक्रमित राख्न पनि भएन । हरेक दिन बिरामी भर्ना गरिदिनुपर्‍यो भनेर दर्जनौं मानिसले फोन गर्नुहुन्छ । हामी निकै प्रेसरमा काम गरिरहेका छौं ।’
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीका बेला जात्रा नगरौं, सम्मेलन नगरौं, भीडभाड नगरौं भनेकै हो तर कसैले सुनेनन् । त्यो भन्दैमा मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको पालना भए/नभएकोतर्फ ध्यान दिएन । ‘मन्त्रालयमा छलफल हुँदा हामीले अक्सिजनको जोहो गरौं, औषधि स्टक राखौं भनेकै हो,’ उनले भने, ‘तर सेरोप्रिभेलेन्समा राम्रो अवस्था देखिएको छ, धेरै आत्तिनुपर्दैन भनेर उहाँहरूले नै हामीलाई चुप लगाएको हो ।’कान्तिपुर